Maitiro & kutsvaga kwezvinyorwa pane iyo nyaya:wordpress
Dzidza kugona Wordpress
10 yakanakisa nhengo yeWordPress madingindira ekukupa iwe kutanga musoro
Mune zera iwe paunenge uchida kuvaka webhusaiti yenhengo, premium WordPress madingindira mhinduro. Yakagadzirwa zvine hungwaru, ivo vanogara vari sarudzo yakanakisa kana zvasvika pakuvaka webhusaiti inorarama zvinoenderana nazvo. Iyo rondedzero yeakanakisa kuve nhengo WordPress madingindira pazasi a
9 akanakisa eWordPress social login plugins e2021
Sewe webhusaiti admin uye mushambadzi, iwe unogara uchitsvaga nzira dzekudzora kukakavara mune yako yevatengi ruzivo. Kubva pakuwana mhando yako kuti ugamuchire email yekusimbisa odhi, vatengi vanotarisira chiitiko chinotapira chekutenga uye pasina matanho asina basa. Zvakajairika kudzokororwa nenhe
Yekumhanyisa peji yave iri chinzvimbo cheGoogle kubvira 2010 yematafura uye 2018 yefoni. Iyo zvakare inokanganisa iyo nguva vashandisi yavanoshandisa pane yako saiti, kwavo kutendeuka, uye maonero avo echiratidzo chako - muchidimbu, kumhanya kwewebhu webhusaiti yako kune zvakakomba zvakanyanya pane
Wagadzirira kuburitsa zvimwe zvinotungamira? Unoda kuwedzera mari yaunotengesa? Peji rakasarudzika, rinoteerera, uye rakagadzirwa zvakanaka rinogona kukubatsira kuti uite izvozvo chete. inoshanda. Nhau dzakanaka ndedzekuti kana iwe uine WordPress webhusaiti, unogona kusarudza kubva kune akati wandei
Kuvaka yakabatana saiti ndeimwe yenzira dzakanakisa uye dzakaratidza dzekuti uwane mari online. Kuita mari yako saiti neimwe nzira - senge neshambadziro - zvinoda kuti iwe ugadzire traffic yakawanda usati waita chero mari. Asi nekubatana kwekushambadzira, unogona kuita mari nemari shoma yetraffic ya